Abicah Factory - China Abicah Abakhiqizi nabahlinzeki
Izinto ezingabicah zamukelwa yibo bonke abantu ngoba zihlanzekile futhi zithambile isici. Izinto eziningi ze-silicone ziyibanga lokudla, zingasetshenziselwa imikhiqizo ethinta ukudla. Zonke izinhlobo zobubunjwa, ukwakheka nemibala ziyatholakala ezintweni ze-silicone ukukhombisa noma ukuveza okushiwo abaklami, ngisho nomphefumulo ngaphakathi. Izinto ze-silicone esivame ukuzenza zingama-silicone amabhande noma amasongo anokuhlobisa okuhlukile, amaketanga okhiye, amakesi wefoni, izikhwama zemali nezikhwama, izinkomishi, izembozo ze-Cup Lid, ama-Coasters, ezinye izinto zasekhishini kanye ne-ETC. Okuqukethwe kungadlulisa zonke izinhlobo zamazinga wokuhlola nge-US noma i-European Institution, sicela uqiniseke ukuthi kuphephile ukusebenzisa izinto ezithinta ukudla. Imibuzo yakho kufanele isingathwe kungakapheli amahora angama-24 yithimba lethu elisebenza kahle. Ikhwalithi engcono kakhulu, amanani ancintisanayo, isikhathi esifushane sokukhiqiza, kanye nensizakalo enhle kufanele kukwenze weneliseke ngobudlelwano bebhizinisi.
Isongo Magnetic Ukuze Izinwele Ukugunda